IPhone-ka cusub ee loo yaqaan 'iPhone 11' ayaa u ogolaaday Apple inay ku koraan inta badan suuqyada marka laga reebo Mareykanka | Wararka IPhone
IPhone-ka cusub ee loo yaqaan iPhone 11 ayaa Apple u ogolaaday inay ku koraan inta badan suuqyada marka laga reebo Mareykanka
Markii suuqa taleefanka guud ahaan la bilaabay siiyaan calaamadaha daalka, Apple waxay ka saartay gacanteeda iPhone XR, iPhone raqiis ah oo noqday iPhone-ka ugu iibinta badan ee la bilaabay 2018 ee shirkadda saldhigeedu yahay Cupertino. Sannadka 2019, way sii fiicnaatay xitaa haddii ay ku habboon tahay qaabka soo gelitaanka ee iPhone 11, marka lagu daro hoos u dhigista qiimaha.
Soo saarista iphone 11 ayaa u saamaxday shirkadda Tim Cook ku kasbadaan suuqyada Yurub, Australia iyo JapanSi kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in suuqa maxalliga ah, Mareykanka, uusan si isku mid ah u socon. Marka loo eego xogta ay daabacday Kantar seddexdii bilood ee seddexaad ee 2019, oo ay ku jiraan kaliya hal usbuuc oo iibka iPhone, waxaan horeyba u heli karnaa fikrad ah sida suuqa u socdo.
Qeybta IPhone ee suuqyada ayaa kordhay shan wadan oo yurub ah: Spain, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Boqortooyada Ingiriiska, iyadoo celcelis ahaan kordhay laba dhibcood. Kordhinta ay soo martay iibka iPhone-ka ee Australia waxay taagan tahay 4 dhibcood, halka Jabbaan, kororku aad ayuu uga sareeyay, wuxuuna gaadhay 10,3 dhibic koritaan.
Si kastaba ha noqotee, Mareykanka iyo Shiinaha, iibka ayaa hoos udhacay dhibcaha 2 iyo 1,3. Sababta ugu weyn ee iibku uga dhacay Shiinaha waxaa ugu wacan dagaalka ganacsi ee labada dalba ay isku hayaan. Shiinaha, iibka taleefannada casriga ah ee shirkadaha Aasiya waxaa lagu tiriyaa 79,3% iibka, iyadoo Huawei iyo Honor ay qaateen 46,8% wadarta iibka.
Samsung, dhinaceeda, wali waa boqorka suuqa Yurub, Mahadsanid taxanaha A, oo ay ku guuleysatay inay dhigto 5 ka mid ah moodooyinkaas 10 ka mid ah iibiyeyaasha ugu fiican Yurub oo dhan illaa rubuc saddexaad ee 2019. Samsung's A A wuxuu ahaa jawaabta shirkadda Kuuriya ee tartanka sii kordheysa ee shirkadaha Aasiya, oo ku saleysan tirooyinka iibka, waa iska cadahay inay si fiican u shaqeyneyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 11 » IPhone-ka cusub ee loo yaqaan iPhone 11 ayaa Apple u ogolaaday inay ku koraan inta badan suuqyada marka laga reebo Mareykanka
Apple Pay waxay dhaafeysaa Starbucks oo ah tan ugu isticmaalka badan mobilada Mareykanka